ဘောလုံးလောကကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့တဲ့ နည်းဗျူဟာများ (၁)
7 Apr 2019 . 4:41 PM
ဘောလုံးလောကမှာ မဟာဗျူဟာနဲ့ ကစားကွက်ပုံစံ ( Strategies and Formations) တွေဟာ အသစ်တွေ ပေါ်လာလိုက်၊ ကာလအတော်ကြာရင် ပျောက်ကွက်သွားလိုက်နဲ့ သံသရာ လည်ပတ်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ တချို့နည်းဗျူဟာတွေကြတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်တံ့ခဲ့သလို ခေတ်အလိုက် ဘောလုံးသမားတွေ၊ နည်းပြတွေဟ အဲဒီ နည်းဗျူဟာကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အသုံးပြုခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့ Strategies တွေဆိုရင် အခုလက်ရှိအချိန်အထိ ဘောလုံးလောကမှာ လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေဆဲပါပဲ။ အခုဖော်ပြမှာက ဘောလုံးလောကကို ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ နည်းဗျူဟာအကြောင်း အပိုင်း(၁)ဖြစ်ပါတယ် . . .
‘False 9’ နည်းဗျူဟာက ဒီဘက်ခေတ်မှာ ပြန်ရေပန်းစားနေပေမယ့် ဒီနည်းဗျူဟာက အရင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ခေတ်တုန်းက ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းမှာ နေရာအလိုက် ကျောနံပါတ်တွေ သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး ဂိုးသမားက နံပါတ်(၁)၊ နောက်တန်းတွေက (၂၊၃၊၄၊၅) စသဖြင့်ပါ။ ကျောနံပါတ်(၉)ဆိုတာက ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင် တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ်တွေ ၀တ်ဆင်ကစားတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောနံပါတ် (၉)၀တ်ပြီး တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် မကစားရရင်၊ Attacking Roel မှာ မကစားရရင် သူ့ကို ‘False 9’လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ ပိုပြီးထင်သာမြင်သာအောင် ပြောရရင် တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ်တွေသာ ၀တ်ဆင်ရတဲ့ (၉၊ ၁၀)နံပါတ်တွေနဲ့ ကစားသမားဟာ တိုက်စစ်မှူးနေရာမှာ မကစားတာပဲဖြစ်ပါတယ် အဲဒီကစားသမားရဲ့ အဓိက တာဝန်ဟာ Penalty Box ထဲမှာ နေရာယူဖို့ မဟုတ်ဘဲ ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ပြိုင်ဘက်ကွင်းဘက်ခြမ်းမှာ Space တွေ ရှာနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ‘False 9’ ကို ပထမဆုံး အသုံးပြုခဲ့တာက သြစတြီးယားအသင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၃၀ ၀န်းကျင်ကာလတွေမှာ အဲဒီနည်းဗျူဟာကြောင့် နာမည်ကျော်ခဲ့သလို ‘False 9’အဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ Matthias Sindelar လည်း လူသိများခဲ့တယ်။ ၁၉၅၀ ကျော်ကာလတွေမှာ ဟန်ဂေရီအသင်းကလည်း အဲဒီနည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့ဖူးတယ်။
မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာတော့ ဒီနည်းဗျူဟာကို ပြန်အသက်သွင်းခဲ့သူက ရိုးမားနည်းပြဟောင်း စပယ်လက်တီ Spaletti ပါပဲ။ ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီမှာ တော့တီ Totti ကို ‘False 9’ ပုံစံကစားခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့အတွက် တခြားထိပ်သီးနည်းပြတွေပါ အဲဒီနည်းဗျူဟာကို ပြန်လည်အသုံးချခဲ့ကြတယ်။
မန်ယူဂန္ထ၀င်နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန် Alex Ferguson ဟာ ရွန်နီ Rooney ၊ တီဗက်ဇ် Tevez ၊ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo တို့ (၃)ဦးကို Attacking Role နေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ် မဟုတ်တဲ့ Strikerless Formation ကို အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာ မန်ယူပရိသတ် အားလုံးအသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အာဆင်နယ်ဂန္ထ၀င်နည်းပြကြီး အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger လည်း ဗန်ပါစီ Van Persie ကို ‘False 9’ပုံစံ ကစားစေခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ‘False 9’ နေရာမှာ အကောင်းဆုံး အသုံးတော်ခံခဲ့တာက ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ Messi ပါ။ ဂွါဒီယိုလာ Guardiola လက်ထက် ဘာစီလိုနာအသင်း အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ခဲ့တာကလည်း မက်ဆီရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အများကြီးပါတယ်။
မက်ဆီဟာ Attacking Role ဖြစ်ပေမယ့် သူ့တာဝန်က ကွင်းလယ်အထိ ဆင်းပြီး ဘောလုံးယူ၊ တိကျသေသပ်တဲ့ Passing တွေနဲ့ ပြိုင်ဘက်ခံစစ်လမ်းကြောင်းတွေကို ဖြိုခွဲ၊ အဲဒီမှာ လွတ်ထွက်သွားတဲ့ Space တွေကို ကျန်တဲ့ တိုက်စစ်ကစားသမားတွေက အသုံးချနိုင်ဖို့ပါပဲ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မက်ဆီအပြင် အင်နီယေစတာ Iniesta လို ကစားသမားမျိုးပါ ရှိနေတော့ ဘာစီလိုနာဟာ ကျားကို အတောင်တပ်ပေးသလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ယူရို-၂၀၁၂ ဗိုလ်လုပွဲတုန်းက စပိန်အသင်းနည်းပြဒဲလ်ဘော့စကေး Del Bosque ဟာ တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ် လုံးဝမပါဘဲ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမား ဖာဘရီဂတ်စ် Cesc Fabregas ကို ‘False 9’ ပုံစံ ကစားစေခဲ့တယ်။ ယူရိုဗိုလ်လုပွဲလို အဓိက နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ‘False 9’ နည်းဗျူဟာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဒဲလ်ဘော့စကေးရဲ့ လုပ်ရပ်က အားလုံးကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ရပေမယ့် အီတလီအသင်းကို (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
အခုနောက်ပိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ‘False 9’ နည်းဗျူဟာ အသုံးပြုမှုတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဟောင်း ကွန်တီ Conte ဟာ တောင်ပံကစားသမား ဟာဇက် Hazard ကို ‘False 9’ အဖြစ် ကစားစေခဲ့ဖူးပါတယ်။ ‘False 9’ နည်းဗျူဟာ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာက နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း အခုအချိန်အထိ ဘောလုံးလောကကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်ဆဲလို့ ဆိုရမှာပါ . . .
Photo:the great change,Twitter,Protege Sports,SPORTbible,Special for World